HDPE asa fanadiovana y Sodina - China Ningbo Sunplast Sodina
Fenitra ISO4427 HDPE dredge / fitrandrahana harena ankibon'ny tany sodina avy dn160-1200mm, welded amin'ny flanges amin'ny roa farany, misy amin'ny 6m na 11.8m lavany, vy customrized hanampy vava vola misy, avo lenta amin'ny vidiny ambongadiny tsara indrindra. Contact us for antsipirihany bebe kokoa ny HDPE dredge sodina !!!
HDPE asa fanadiovana y sodina no atao amin'ny HDPE (ambony hakitroky polyethylene) ara-nofo, ary efa vokatra amin'ny lafiny samihafa mba hampiasa indrindra ny ranomasina mba hitondra ny dranomasina fasika ho dredge ny fotaka. Ny HDPE dredge sodina no vokarina ary welded ho toy ny "HDPE flanged sodina", izay faran'ny roa dia welded amin'ny HDPE flange adapters & vy manohana vava vola.
Ny asa fanadiovana y sodina HDPE dia mety ho mora foana ho tafavory na dismountabled, amin'ny alalan'ny screwing up / eny ny horonan / voanjo ho methanical fifandraisana roa hanampy vava vola vy any amin'ny faran'ny mpitsoka sodina rehetra.
SUNPLAST HDPE dredge sodina dia matetika novokarina tamin'ny 5.8m na 11.8m lenghts. Ny sodina dia azo omena amin'ny dn160-1200mm hatevin'ny rindrina maro samihafa toy ny isan-SDR hafa & natao tsindry ampy, sy ny fanao-nanao vy manohana vava misy.
Product anarana HDPE dredge sodina
habe misy DN160-1200mm
SDR / tsindry naoty SDR11-PN16, SDR13.6-PN12.5, SDR17-PN10, SDR21-PN8, SDR26-PN6
Top virjiny kalitao ara-nofo PE100 manta
Colors azo sodina Mainty na manga, na toy ny isan-fangatahana
Fenitra for sodina ISO4427, AS / NZS4130, BS EN 12201
Fenitra for vy hanampy vava vola aminy,
Customrized natao misy
Marika momba ny sodina Customer ny famantarana azo tsy laniny
santionany misy Eny, azo santionany kely be
fonosana fomba Normal fanondranana fonosana.
Ny halavan'ny sodina dia mety ho ao amin'ny 5.8m na 11.8m, welded amin'ny sisiny roa flanges
Production fe-potoana Arakaraka ny mba famarana.
Tokony ho 10 andro ho 20ft fitoeran-javatra, 15-20 andro ho 40ft fitoeran-javatra
Warranty fotoana 3 taona ho an'ny ara-dalàna mampiasa
Payment teny T / T na LC amin'ny fahitana
FOB Loading seranan-tsambo Ningbo na Shanghai Shina
Toerana niaviany Zhejiang, Sina
SUNPLAST HDPE dredge sodina azo omena amin'ny dn160mm ny 1200mm. Ny fepetra arahana toy ny eto ambany:
Fa PE100 ara-nofo
Amin'ny maha-lafatra vahaolana ho an'ny asa fanadiovana y asa, SUNPLAST HDPE dredge sodina manana tombony maro toy izao manaraka izao:
☑ harafesiny fanoherana
☑ Avo mikasika ny Fahasarotana
☑ Light lanja
☑ Mora mivory na dismountabled
☑ Excellent malefaka sy fanoherana scratches fahafahana.
☑Good manao fanoherana, rindrina ambany friction coefficient, kely mikoriana fanoherana, tsara fampitana fahaizana.
Low ☑ rafitra vola, fikarakarana tsy vidin'ny
Previous: HDPE Gas Sodina
Manaraka: Lowest Price for P235gh Equivalent Steel Pipe - SPA250-4M Manual Butt Fusion Welding Machine – SUNPLAST
10 HDPE Sodina
12 HDPE Sodina
16 HDPE Sodina
18 HDPE Sodina
2 mirefy HDPE Sodina
2 Poly Sodina
20 HDPE sodina
24 HDPE Sodina
3 HDPE Sodina
4 HDPE Sodina
6 HDPE Sodina
600mm HDPE Sodina
8 HDPE Sodina
Asa fanadiovana y Grade HDPE Sodina
Mitsingevana asa fanadiovana y Sodina
HDPE Dredge float sodina
HDPE Dredge sodina
HDPE sodina Fa Dredge
HDPE plastika sodina
HDPE Plastika Tubing
HDPE Poly Sodina
High Density Polyethylene Sodina
PE Dredge Sodina
Poly Dredge sodina
Polyethylene Dredge Sodina